Tilmaamaha MACD Qaybta 2. Istaraatiijiyadda iyo talooyinka | vfxAlert official blog
Tilmaamaha MACD Qeybta 2: istiraatiijiyadda iyo talooyinka
Qaybta koowaad ee maqaalka, waxaan soo bandhignay xeerar aasaasi ah oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah iyadoo la adeegsanayo tilmaame MACD. Qaybta labaad, waxbadan ka baro sida loo kordhiyo macaashka adoo adeegsanaya aaladaha kale ee falanqaynta farsamada.
MACD iyo oscillators
Algorithm-ka xisaabinta ma bixinayo heerar aasaasi ah oo xad dhaaf ah / xad dhaaf ah, marka ganacsaduhu waa inuu go'aamiyaa shuruudaha ay ku falanqeynayaan dhaqdhaqaaqa qiimaha. Natiijooyinka wanaagsan waxay muujiyeen heerar 80 - 90, burburka kaas oo tilmaamaya bilowga sixitaanka maxalliga ah iyo dib u celinta. Sida tirakoobyadu muujisay, astaamahan ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa inta badan ka kalsooni badan kan oscillators-ka caadiga ah!
On isbeddel xoog leh, si ay u taageeraan booska, isticmaal dib u dhaca oscillators, taas oo sida caadiga ah ka dib markii burburka ee aagagga daran "ul" iyaga oo ku jira muddada dhaqdhaqaaqa oo dhan. Waxa kale oo aad dejin kartaa amarro sugitaan ah oo ku saabsan jebinta heerarka heerarka dhexdhexaadka ah, xiritaanka ka dib markaad ka gudubto calaamadaha ama xariiqyada eber.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in la isticmaalo qalab isku dhafan, sida MACD + RSI sida ku cad:
Isku darka "MACD + Stochastic" ayaa sidoo kale bixiya natiijooyin wanaagsan, gaar ahaan suuq aan degganeyn iyo waxyar uun ka hor dib u noqoshada. Calaamadaha MACD ee dhifka ah ayaa shaandheeya "nasasho la'aan" Stochastic.
Ha iloobin falanqaynta isku dhafan ee dhowr jadwal: toddobaadlaha ah ee W1, waxaan eegeynaa isbeddelka muddada-dheer, D1-H1 waxaan bilaabaynaa inaan raacno oscillators-ka oo aan sheegno meesha laga soo galayo ee M30-M15.
Tirooyinka falanqaynta farsamada ee jaantuska MACD
Istaraatiijiyadda dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer ee ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah s , saxnaanta tirooyinka soo baxaya waxay gaarayaan 90% horumar xasiloon sida ku cad habka caadiga ah. Hantida tilmaame sababtoo ah faa iidadeeda si dhif ah looguma xusin suugaanta iyo xirfadleyda.
Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa ganacsadaha caanka ah ee Philip Neely oo, ka ganacsanayay tirooyinka ku xusan waqtiga H4 uusan haysan hal bil lumis ah muddo saddex sano ah. Run, waxay ahayd suuqa saamiyada, laakiin natiijooyinka ka soo baxa Forex ma ahan kuwo aan fiicnayn.
Calaamaduhu badanaa way dheereeyaan, waqtiyo waaweyn ayaa kuu oggolaanaya inaad sugto xaqiijinta celceliska ugu yar ee daahsan oo aad gasho bilowga isbeddel cusub
Nidaamka caadiga ah "MACD + khadadka isbeddelka + taageerada / iska caabinta»
Tilmaamaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa soo jeediyay in ay ku taal tilmaamaha in go'aanka ugu dambeeya ee furitaanka macaamil la sameyn doono. Laakiin tani waa aragti ahaan, laakiin qiimaha ku jira isbeddelku wuxuu ku socdaa heerar qiimo leh, taas oo laga yaabo inay noqoto mid sii socota (burburin) ama dib u soo celin (dib u soo celin) ama xitaa dib u soo celin buuxda ee dhaqdhaqaaqa hadda jira. Hawsha ugu weyn ee MACD waa in la garto jabitaan been ah oo markaa kaliya la xaqiijiyo isbedelka.
Aynu eegno tusaalaha: sicirka wuxuu muujiyey dhowr jeer oo aan guuleysan oo khadka taleefoonka ah (fiiri hooska shumaca) iyo histogaraam dhowr baarar casaan ah oo kor u kacaya, taasoo muujineysa mudo dheer oo iib ah, koror tartiib tartiib ah xiisaha furan ee iibsiga. iyo muuqaalka CALL-xulashooyinka.
Astaamaha 'histogaraam' sidoo kale waxay muujineysaa laba hoos u dhigid hoose, sidaa darteed, waxaan ka furaneynaa meel u dhow shamaca oo u dhigma baarka labaad ka dib daqiiqaddii ugu dambeysay.
Tusaalaha labaad: astaamo-garaacistu waxay muujineysaa burburin been ah, in kasta oo la tijaabinayo khadka taageerada oo la xidho shumaca ka hooseeya iyada oo jaleecada hore ay furi karto iibka. Laakiin MACD waxay ka dhigeysaa calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo la joojinayo: muddo dheer oo ah dhaqdhaqaaqa histogaraamku wuxuu ka sii hooseeyaa xariiqyada eber iyadoo si joogto ah u kordheysa ugu yaraan.
Elliott hirar iyo MACD
Faa'iido kale oo tilmaame ah, oo badiyaa ay iloobaan ganacsatadu, in kasta oo falanqaynta farsamo ee qadiimiga ah Bill Williams ee buugga "Trading Chaos" lagu lafa guray mowjadaha qiimaha ee 140 shumacyo isticmaalaya MACD (5.34.5). Fikradda waxaa lagu soo saaray tilmaamayaasha qaababka mawjadaha, halkaasoo MACD loo adeegsaday aalad saadaalin ah meelaha aan ku jirin moodeelka heerka caadiga ah.
Williams wuxuu intaa sii raaciyay inuu isticmaalo Awesome Oscillator (AO), laakiin goobaha aasaasiga ahi waxay ku habboon yihiin suuqa saamiyada, Forex waxay u baahan tahay xulashada xuduudaha si gooni gooni ah hanti kasta iyo xitaa kalfadhi ganacsi.
Adoo adeegsanaya MACD ama AO hantida jaban, mid ayaa isku mar xakamayn kara sameynta moodellada sare iyo ka hooseeya, kala garan kara mowjadda waqtiga ku jirta, oo arki karaa isbeddel cusub oo dhexdhexaad ah iyo mid muddo dheer ah.
Tusaalooyinka isticmaalka MACD ee xulashooyinka ikhtiyaariga ah
Aynu u gudubno istiraatiijiyado adag oo aan tusno dhowr ikhtiyaar oo leh natiijooyin deggan oo ku saabsan lacagta lamaanaha badankood. Waxaad ka soo dejisan kartaa tilmaame MACD iyo wax ka beddelkiisa internetka lacag la’aan.
MACD oo ku taal shaxda qiimaha
Astaamaha waxay u egyihiin tilmaame Ichimoku: kuwa ugu xoogga badan waxay ku sugan yihiin isgoyska qaybaha histogaraam, ka dib burburka soohdimahooda. Ku hay jagada inta qiimaha uu ku sii socdo gudaha ama hoosta / ka sareeya meelaha hadhka leh.
Uu signal binary free la xaqiijin doonaa by beddelo midabka ah ee histogaraam Oo tan iyo buluug in casaan gelin-doorasho, ka casaan si buluug CALL-doorasho. Kaladuwanaanshaha muddada-gaaban ee suurtagalka ah ayaa muuqda, gundhigga Visual MACD waxaa loo isticmaalaa sidii khadad isbeddel weyn oo xagga dambe ah oo ka dambeeya waqtiga dhicitaankiisa.
MACD iyo tartiib tartiib tartiib ah MA
Habka ugu fudud ee lagu kasban karo dib-u-dhaca ayaa ah iyadoo la adeegsanayo celcelis jibbaar ah (EMA) oo leh muddo ballaaran. Ka ganacsiga intraday ee lamaanaha aasaasiga ah ayaa lagula talinayaa, waqtiga shaqada - M30. Qiimaha ugu yar ee tilmaamayaasha waa MACD (24, 52, 18) iyo EMA (100).
Istaraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah: sicirka ka sarreeya EMA waa dhaqdhaqaaq kor u kaca; hoostiisa waa dhaqdhaqaaq hoos u socda. Marka xigta, waxaan u shaqeynaa si waafaqsan habka caadiga ah: xaji booska halka aaladda 'MACD histogram' ay ka sarreyso / ka hooseyso xariiqyada eber, xir xir marka ay u gudbeyso jihada ka soo horjeedka.
Laba tilmaamayaal isbeddel - MACD + Parabolic
Calaamadda ugu horreysa waxay ka timaaddaa Parabolic, markaa haddii seddex shumac ka dib aysan xaqiijin MACD, ka sii bax suuqa, haddii kale, waxaan u furannaa booska jihada.
Waxaan falanqeyneynaa M15-M30, taageerida macaamil ganacsi ee H1, raac xeerarka furitaanka labada tilmaam. Laguma darin calaamadaha is khilaafsan midba midka kale, kiisaskaas, waxaan eegeynaa kala duwanaansho suurtagal ah oo ku saabsan MACD.
Intaa waxaa dheer, ma fureyno inta lagu jiro xilliyada kala-baxa ballaaran, halkaasoo Parabolic uu sii wado inuu beddelo jihada. Way fiicantahay in la sugo isbeddel cusub oo ku saabsan ganacsiga ganacsiga ikhtiyaariga ah oo aan khatar u galin macaamilo muddo-gaaban ah!
Xuduudaha kala duwan ee tilmaamayaasha waxaa loogu talagalay in lagu magdhabo dib u dhaca sida ugu macquulsan: iyadoo la isbarbardhigayo celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa, waxaan heleynaa "dhakhso" iyo "gaabis" xulashooyin kala shaandheynaya calaamadaha midba midka kale. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si sax ah u qiimeyso isbeddelka iyo xogta xad dhaafka / oscillators-ka xad dhaafka ah.
Waqtiga loogu talagalay helitaanka meelaha laga soo galo iyo raadinta booska waa laga bilaabo H1 iyo ka sareeya. Natiijooyinka ugu xasilloon ayaa lagu muujiyey lammaanaha Aasiya (USD / JPY, AUD / USD, NZD / USD).
Ku dar tilmaame isbeddel
Nooc wax laga beddelay oo loo yaqaan 'MACD' oo loogu talagalay dib-u-celinta suuqyada ganacsiga (marka laga hadlayo Forex, koror / hoos u dhac ku yimaada qiyaasta shilinka), guriga ayaa sidoo kale sifiican loo sifeeyay.
Waxaa loo isticmaali karaa wixii hanti ganacsi ah, marka laga reebo xilliyada furitaanka / xiritaanka / isgoysyada kalfadhiyada ganacsiga, sii deynta wararka aasaasiga ah ee aasaasiga ah, falalka mala awaalka ah bilowga iyo dhammaadka usbuuca - ka dib calaamadaha isbeddelku waxay noqdeen kuwo been abuur ah oo waxaa wanaagsan ka fiiri suuqa tilmaamayaasha mugga shaqsiyeed.
Calaamaduhu waxay dhacaan markay ka gudbayaan heerka eber. Midabka baararka ayaa go'aaminaya heerka dhaqdhaqaaqa ciyaartoyda, sida had iyo jeer dib u noqoshada histogaraamku waxay muujineysaa in isbeddelku yaraaday oo ay lagama maarmaan tahay in la xiro booska hadda.
Aan soo koobno:
Faa'iidada ugu weyn ee MACD waa ogaanshaha isbeddel lagu kalsoonaan karo, kaas oo hubiya ganacsadaha inuu ka furo boosaska ka soo horjeedka isbeddelka hadda jira. Laakiin, halkan waa inaad had iyo jeer xusuusnaataa xeerka aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada - markasta oo uu sii weynaado waqtiga, calaamadda ayaa lagu kalsoonaan karaa. Gaar ahaan haddii aad isticmaasho celceliska guuritaanka ama farqiga u dhexeeya marka loo eego khadadka calaamadaha.
Sidaa darteed, waxaan ku bilaabaynaa falanqaynta H4 kadibna waxaan kaliya xaqiijineynaa dhaqdhaqaaqa H1 iyo M30 - haddii kale, waxaad marka hore u wareegi kartaa calaamad been ah. Tani waa faa'iido darrada ugu weyn ee MACD, sababtoo ah 70-80% waqtiga marka suuqa uu ku dhaqaaqo dhinacyada kala duwan ee ballacyada kala duwan, calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah ayaa been abuur ah, sidaa darteed way fiicantahay in diiradda la saaro aaladaha kale muddadan.
Tilmaamaha MACD waxaa si gaar ah loogu talinayaa bilowgayaasha aan weli lahayn samirka lagama maarmaanka u ah inay sugaan dhammaan shuruudaha barta laga soo galayo in la buuxiyo. Haa, dib-u-dhac ayaa jira, laakiin waa si dhab ah xaqiiqadani waxay noo oggolaanaysaa inaan lagu mashquulin "buuqa" oo aan si sax ah u qiimeyno xaaladda.
Maaddaama ay jiraan isku-dar ah sifooyinka isbeddellada iyo qalabka kooxda oscillator, tilmaamuhu wuxuu aasaas u noqon karaa istiraatiijiyad la isku halleyn karo, laakiin looma isticmaali karo iyada oo aan la sifeyn iyo xaqiijin dheeri ah lahayn. Waxaan u baahanahay, ugu yaraan, mugga suuqa iyo hantida, kuwaas oo lagu garto isbeddello joogto ah oo joogto ah. Kaladuwanaanta, xaalad kastoo jirta, waxay noqon doontaa calaamadaha ugu xoogan!
Tilmaamaha MACD iyo wax ka beddelkiisu wuxuu sii ahaanayaa mid ka mid ah aaladaha lagu kalsoonaan karo ee faa'iidooyinka ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee xasilloon , in kasta oo ay ku gacan sarreeyaan ganacsiga istiraatiijiyadeed ee sarreeya (HFT), kaas oo isku dayaya inuu beddelo qaababka caadiga ah. Ganacsaduhu wuxuu dooran karaa calaamadaha ku habboon istiraatiijiyadiisa, iyo tan ugu muhiimsan, fiiri sawir dhab ah oo macquul ah ee dhaqdhaqaaqa qiimaha adigoon dib u cusbooneysiin.